स्वास्थ्य Archives - Page3of6-
रुबी धारण गर्नुका स्वास्थ्य सम्बन्धी फाइदाहरु यस्ता छन, हेर्नुहोस !
जेठ १३, २०७६ GA
धर्मकर्ममा बिश्वास गर्नेहरु आफ्नो भाग्य चम्काउनाका लागि रुबीको धारण गर्ने गर्छन तथापी रुबि धारण गर्नुका धार्मिक मान्यताका साथै स्वास्थ्यका लागि समेत फाइदाजनक रहेको छ। यसै अनुसार आज हामी रुबी धारण …
यस्ता समस्या भएकाहरुका लागि तरबुजाको सेवन हुन सक्छ हानिकारक , जानिराखौं !
शरीरका लागि आवश्यक फाइबरको मात्रा पर्याप्त पाइने भएकाले तरबुजा स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको छ। गर्मीको समयमा तर्बुजाको सेवन गर्नाले शरीरमा पानीको मात्रामा कमि हुन पाउदैन। तर पानी र फाइबरको मात्रा …
यी हुन् ब्रेन ट्युमर हुँदा देखिने सामान्य लक्षणहरु , जानिराखौं !
ब्रेन हाम्रो शरीरको सबैभन्दा अभिन्न अंग हो। ब्रेनमा बिभिन्न कारणले समस्या देखा पर्न सक्छ त्यसैले यसको सम्बन्धमा बिशेष सजक र सावधानी अपनाउनु आवश्यक हुन्छ । आज हामी ब्रेनमा देखिने प्राणघातक …
काँक्रोको सेवन गरि यसरी घटाउन सकिन्छ शरीरको अनावश्यक मोटोपन , हेर्नुहोस !
जेठ १०, २०७६ GA
आजभोलि मोटोपन कम गर्ने अनेक बहानामा मानिसहरु विभिन्न ब्यायाम गर्ने , डाईट गर्ने तथा अन्य विभिन्न खर्च गरेर यसबाट छुटकारा पाउने हर प्रयासमा रहेका हुन्छन। तर यस्ता उपायले पनि कुनै …
यी ५ समस्या भएकाहरुले भुलेर पनि नगर्नुहोस अदुवाको सेवन , जानिराखौं
अदुवालाई स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक मानिन्छ। तथापी कुनै समयमा भने अदुवाको सेवन स्वास्थ्यका लागि खतराजनक साबित हुन् सक्छ। गर्वती महिला , दुब्लो पातलो मानिस , पित्त एवम पत्थरीका बिरामीहरुले सकेसम्म अदुवाको …
धुम्रपान मात्र नभई यी ५ कारणले हुन सक्छ मुखको क्यान्सर, जानिराखौं !
धुम्रपान नगर्नेलाई मुखको क्यान्सर हुन्न भन्नु भ्रमित कुरा हो। धुम्रपान मुखको क्यान्सर हुने प्रमुख कारण हो तर यसको अलवा क्यान्सर हुनुमा अन्य थुप्रै कारणहरु पनि रहेका हुन्छन। हरेक बर्ष मुखको …
यी ३ ड्राई फ्रुट हुन सक्छ यस्ता ६ स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याको काल , हेर्नुहोस !
जेठ ०७, २०७६ GA
बदाम , ऒखर , किसमिस जस्ता यी तिन ड्राई फ्रुटमा प्रोटिन , क्य्लासियम , भिटामिन ए , भिटामिन ई र एंटीऑक्‍सीडेंट्सका साथै अन्य पोषक तव प्रसस्त मात्रामा पाइन्छ। जसले हाम्रो …
स्वाद र सन्तुष्टिका साथ साथै स्वास्थ्यका लागि समेत फाइदाजनक छ दहि , हेर्नुहोस !
दहि बिशेष गरि सबैसंग परिचित नाम हो। यसको प्रयोग जाडो समयमा भन्दा गर्मीको समयमा बढी हुने गर्छ। दहि स्वास्थ्यका लागि समेत फाइदाजनक रहेको छ। यसमा प्रसस्त मात्रामा क्याल्सियम , फस्फोरस …
हास्नु नै बाँच्नु हो , जान्नुहोस हास्नुका बिशेष फाइदाहरुको बारेमा !
भनिन्छ हाँस्नु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक रहेको छ। हालसालै अनुसन्धानकर्ताहरुले पनि हास्नुले साच्चिकै खुसि महसुश गर्ने बताएका छन। साइकोलोजिस्ट्सको एक अध्ययनले पनि ५० बर्षको डाटा हेर्दा मानिसको हाँसो उनीहरुको अनुहारको हाउभाउ …
मोटोपन र मधुमेहको समस्याका लागि लाभदायक छ भिंडी पानीको सेवन , जानिराखौं !
जेठ ०३, २०७६ GA
भिंडीलाई तरकारीको रुपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। तर तरकारीका साथ साथै भिंडीको पानीको सेवन गर्नु पनि स्वास्थ्यका लागि लाभदायक रहेको छ। हरेक दिन बिहान खाली पेटमा भिंडी पानीको सेवन गर्नाले मधुमेह …